Imicimbi yefowuni yaseTshayina kunye nabenzi | SJJ
Iimeko zethu zefowuni zenziwe nge-TPU ekumgangatho ophezulu okanye i-PVC ethambileyo kunye nesilicone. Kananjalo inokwenza ngealuminiyam kunye neglasi enomsindo kunye nemagnethi, egubungele umva kunye neekona zefowuni. Olu hlobo lwezixhobo alunakukhusela kuphela ifowuni yakho kwimikrwelo kunye nokothuka, kodwa luhlala luqinile, lukhululekile kwaye alunamanzi.
Slim kwaye ayisindi, imeko eguqukayo ehlala ixesha elide ekhusela isikrini sakho
Imirhumo yokubumba yasimahla xa ukhetha ubungakanani / ubungakanani esele bukhona
Iilogo zesiko ezenziwe kwityala lefowuni zinokuprintwa kwe-UV yedijithali okanye ukuprinta kwescreen
Umzi-mveliso ophicothiweyo weSedex, siqinisekile ukubonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu
I-MOQ ephantsi, inikezela ngenkonzo ye-OEM.
Egqithileyo Abaphethe iifowuni
Okulandelayo: Ukuma kweefowuni kunye nabaphathi beKhadi
Iimeko zeFowuni yesiqhelo
Amatyala efowuni amnandi
Iphone 7 Amatyala efowuni
Iphone 8 Amatyala efowuni